Uyabakhuthaza Noma Uyabadikibalisa Abafundi Bakho? | Martech Zone
Uyabakhuthaza Noma Uyabadikibalisa Abafundi Bakho?
NgoLwesibili, ngo-Mashi 20, i-2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla ebusuku ngithole i-imeyili evela eBorder. Kunomncintiswano eGather wokubhala ngendlela uthisha ayishintshe ngayo impilo yakho.
Ukubhalwa kwebhulogi kwakamuva okuvela kuBrian Clark weCopyBlogger kwaba ugqozi lwami, 5 Amaphutha Ohlelo Lolimi Akukwenza Ubukeke Uyisimungulu. UBrian ubhale lokhu okuthunyelwe emasontweni ama-2 edlule, kepha bekungigcina njalo kusukela lapho. Ngihlala ngilwa nohlelo lolimi nesipelingi.
Mayelana Nomncintiswano: Uyamazi uthisha owenza umehluko? UBorders noGather bangathanda ukuzwa indaba yakho ukuze sikwazi ukuyabelana nabanye futhi sigubhe umsebenzi omuhle owenziwa othisha nsuku zonke. IBorder izokhetha abane abazongena kowamanqamu ukuthola i $ 50 Borders Gift Card kuthi kowine inhlanhla eyodwa athole i $ 250 Borders Gift Card.
Emini ngicabanga ngalokho engikufundile, engikufundile nengikufezile. Ekhaya lami lokushayela, ngivame ukuqoqa leyo micabango ekhanda lami futhi ngihlele ukuthi babhale kubhulogi yami. Ngesikhathi ngihlala phansi ukubhala, okuqukethwe sekukulungele ukuqhuma. Ngijwayele ukubhala 'emifudlaneni yolwazi'. Angikwazi ukuthayipha ngokushesha okukhulu… ngakho imisho nezigaba zami zivame ukungahambi kahle futhi zeqe.
Ngaso sonke isikhathi, ngishiya amaphutha ambalwa. Ngigcina okuthunyelwe njengohlaka. Ngifunde okusalungiswa. Ngikufundile-ke ukuhlola okusalungiswa. Ngilungisa amaphutha futhi ngiphinde ngishicilele okusalungiswa kaninginingi. Ekugcineni, ngishicilela okuthunyelwe… bese ngikufakazela futhi. Noma nginakekela kakhulu, ngisazoshiya elinye lalawo maphutha 'angenza ngibukeke ngiyisimungulu'.
Kepha ngeke kungivimbe ukubhala. Ngiyenqaba ukukuvumela.
Iphrojekthi ye-Gather yangikhuthaza ukuthi ngibhale ngothisha wami wesiNgisi webanga lesi-8, uNkk. Rae-Kelly. Uma ungathathi umzuzu noma emibili ukufunda iposi, ngizokugcwalisa. Ngaleso sikhathi empilweni yami bengingaqiniseki ngami futhi bengidinga kakhulu umuntu ozonginikeza isizathu sokuzitholela inhlonipho ethile ngami .
Esikhundleni sokugxila ekubhaleni kwami ​​okubi, isipelingi, kanye nohlelo lolimi, uNkk Rae-Kelly wahlwaya umsebenzi wami ukuthola okuhle kunokubi. Ngokugxila kokuhle, ngangifuna ukufunda futhi ngenzele uNkk Rae-Kelly umsebenzi omuhle. Ngingabuyekeza umsebenzi wami ngamaphutha enziwa esikhathini esedlule bese ngenza yonke imizamo ukungaphinde ngiwenze.
UNkk Rae-Kelly ubekwazi ukukhuthaza nokuzakha ukuzethemba kubafundi bakhe. Lokho akuvamile kubo bobabili othisha nabaholi kulesi sikhathi esiphila kuso. Ngiyazi ukuthi uBrian akazange abhale lo mbhalo ukuze 'angenze ngibukeke ngiyisimungulu' kodwa impela lokho kwangikhathaza (futhi kusenjalo). Ithemba lami kini bantu abacabanga ngokubhuloga noma ababhuloga ukuthi izindatshana ezinjengalezi azikudikibalisi.
QAPHELA: Ibhulogi kaBrian kungenye yezinto ezihamba phambili kunetha. Kuyinsiza enhle futhi kungisizile ukuthi ngithuthukise amakhono ami okubhala nokukopisha kakhulu. Yibhulogi enenjabulo futhi evumayo futhi ayisoze yasetshenziselwa ukudikibala ababhali… okuphambene nalokho kuyiqiniso!
Angikwazi ukuwakhulumela wonke ama-blogger, kepha ngizokuxolela ngamaphutha akho futhi ngethemba ukuthi uzongixolela okwami. Angiyifundi ibhulogi yakho ngoba ngizama ukuthola amaphutha akho - ngiyifunda ngoba ngifunda kuwe noma ngijabulela ukubhala kwakho. Ngasikhathi sinye, ngiyethemba uzothatha isikhathi sakho ukugcwalisa ifomu lokuxhumana lami uma “Ngibukeka ngiyisimungulu”. Angisoze ngathukuthela… omunye wabafundi bami kwadingeka angichazele kathathu nge-imeyili lapho ngibhala ngeluleka esikhundleni seseluleko (argh!).
Ngikholelwa ukuthi uhlelo lwami lolimi nokupela isipelingi kuyathuthuka. Ngiyakuqonda lokho, kwabanye abafundi, amaphutha afana nalawo alimaza ukwethembeka kwami ​​nedumela lami ngakho-ke ngisebenza kanzima ukuwathuthukisa. Ngiyethemba, uzongisika kancane bese ugxila emlayezweni hhayi emaphutheni!
Othisha abahle balungisa abafundi babo, abafundi abakhulu bayabakhuthaza. Ungangena esikhundleni umholi, umqeqeshi, umpristi, umzali noma i-blogger esikhundleni se uthisha futhi kugcina kuyiqiniso.
Ngabe lokhu ukuphela kukaHillary Clinton?
Mar 20, 2007 ku-7: 27 PM
Ngingayibhala ithi "uthando olunzima" uDoug, kepha empeleni, ukusetshenziswa "kwesimungulu" esihlokweni bekuwukukhulisa amandla okudonsa kuphela. Kuvela ukuthi lokho bekuyiposi elidume kakhulu engake ngalibhala, okwethusa impela.
Ngiyethemba ayikho imizwa elukhuni. 🙂
Mar 20, 2007 ku-8: 01 PM
Angikwazi ukukutshela ukuthi kangaki kubhalwe kabusha lokhu okuthunyelwe ukuze kungazwakali ngaleyo ndlela! Ibhulogi yakho ibingumthombo omuhle wolwazi nogqozi. Ngiyazi ukuthi ubungaqondile ngaleyo ndlela nhlobo - ngimane nginozwelo ngoba 'ngiphonselwe inselelo yohlelo ngokweqile'. 🙂
Esikhundleni sokudikibala, ibhulogi yakho ibe yisikhuthazo esikhulu kimi (futhi ngiyaqiniseka ukuthi abanye abaningi). Igama 'isimungulu' linamathele kimi selokhu ngalifunda futhi angibonakali ngathi ngilidedela.
Futhi, ngibonile ukuphawula okuningi (ngibhalisile) futhi abaningi babahlaziyi basho kabi! Okuthunyelwe kwakho kuzosiza abantu abaningi (kungisizile). Ngiyethemba abaphawuli abadikibali muntu ekubhaleni. Kuthatha ukuzijayeza nokubekezela ngokwakho!
Ngiyabonga kakhulu ngokuhlola okuthunyelwe! Siyabonga ngakho konke ukukhuthazwa.
Mar 21, 2007 ku-12: 27 AM
Ngicabanga ukuthi bekuyindlela enhle yokukhumbuza abantu ngamaphutha abo. Impela kuzwakala kunzima ukusho isimungulu kodwa mhlawumbe yindlela abantu abathola ngayo ukunakwa. Ngokuqinisekile kwakuyindlela yakhe yokufundisa.
Mar 21, 2007 ku-6: 57 AM
Ngiyavuma, Howie. Kungisizile futhi bekuyiposi elibi. Kuyindida ukuthi ngiyethemba ukuthi 'ayidikibalisi' abantu ekubhaleni okuthunyelwe okunjalo. Iphuzu lami kwakungekhona ukudubula uBrian (ngiyayithanda ngempela ibhulogi yakhe). Iphuzu lami bekuwukuqinisekisa nje ukuthi sibheke ukukhuthazana.
Angifuni neze ukuthi abantu bagweme ukubhuloga uma bengakwazi ukubhala kahle. Into enhle ngokubhuloga ukuthi abantu babhala ngalokho abakwaziyo. Kwesinye isikhathi uhlelo lolimi nesipelingi azikho kulowo mkhakha… kepha izinto ezifana nentuthuko, ukuba ngumzali, ukholo, njll. Kufanele futhi kwabelwane ngazo!
Ngiyabonga ngempendulo yakho!
Mar 21, 2007 ku-10: 17 AM
Uchaza ngqo lokho engikuzwayo lapho ngithola isihloko sokukufaka kubhulogi yami ngizizwa ngilahlekile engqondweni yami. Futhi ngicabanga ukuthi umfundi we-blog akanendaba kakhulu nohlelo lolimi nokupela isipelingi, okubalulekile okuqukethwe yikho.
Into enhle ngokubhuloga ukukhulisa amakhono akho okubhala, njengokuthunyelwe ngeposi ungathola ulwazi futhi ukhombe amaphutha akho, ikakhulukazi abantu abavela ezweni abangenaso isiNgisi njengolimi lwe-1 isib.
Mar 21, 2007 ku-1: 09 PM
Isibonelo sakho mhlawumbe yisibonelo esihle kunazo zonke - bengingakaze ngicabange nangabantu abakhuluma isiNgisi njengoLimi Lwesibili! I-Intanethi ayinayo imingcele yolimi futhi kufanele sisekele futhi sazise ama-blogger ethu asasebenzela ukusazi kahle isiNgisi.
Siyabonga ngokuphawula! Futhi umsebenzi omuhle kubhulogi yakho.
Mar 22, 2007 ku-12: 08 AM
Ngiyavuma ukuthi okuqukethwe kubaluleke kakhulu kepha asikwazi ukukubalekela iqiniso lokuthi abanye abafundi bakhathazekile nje ngalokho ababhali abakubhalile. Noma mhlawumbe, bacabanga ukuthi ukukwazi ukubhala i-athikili ngokwemvelo kusho ukuthi ungumlobi omuhle. Futhi ngalokho, isipelingi esifanele nohlelo lolimi.
Jan 7, 2009 ku-5: 44 AM
Uma kumayelana nokuthunyelwe kwama-blog nama-athikili, uhlelo lolimi
amaphutha * akwenze ubukeke uyisimungulu ngoba incazelo yakho
uyaxakaniseka! (njengecala lakho lokweluleka nge-VS)
Kepha ngihlala ngivame ukubuka okuqukethwe… okuyi
Kunzima ngoba ngizicabanga njengomfundi ohlola amaphutha
noma ngingaqinisekisiwe 🙂
Kungumhlaba ohlukile uma kukhulunywa ngezinto abantu
khokha noma! Uma kungukuqukethwe kwamahhala, i-meh, uhlelo lolimi kanye
amaphutha esipelingi akhona yonke indawo.
Ungazishayi kabi =) Akekho umuntu ophelele (futhi cha
eyodwa kuzoba :))